Saika nirehitra ny tanànan’i Toamasina: nieren-doza ireo orinasa sy tobin-tsolika lehibe | NewsMada
Saika nirehitra ny tanànan’i Toamasina: nieren-doza ireo orinasa sy tobin-tsolika lehibe
Par Taratra sur 22/11/2019
Afobe nijoalajoala, narahina setroka mainty tsy nifankahitana… Saiky zava-doza amin’atambo no nitranga tao Toamasina, omaly, noho ny firehetana goavana nitranga tao Vohitsara. Toerana misy ireo orinasa goavana sy tobin-tsolika lehibe. Afobe vokatry ny… tandrevaka.
Nihoron-koditra ny mponina rehetra tao Toamasina sy ny manodidina tamin’ity firehetana goavambe ity. Raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, niainga avy ao amin’ny toerana misy ireo mpanao letisia mifanila amin’ny tobin-tsolika Galana ny afo satria avy nampiditra vokatra tao amin’ny orinasa iray mpanondrana letisia ireo mpiasa ka nanary fako ary nandoro izany. Niitatra anefa ny afo satria toerana fanarian’ny orinasa Solima ireo fako avy amin’ny solika ity toerana ity, miampy ireo ambinambin-javatra miendrika godorao sy menaka na solika izay mahatratra hatrany amin’ny arivo metatra toradroa. Voalaza fa eo amin’ity toerana ity avokoa ny fanarian’ireo orinasa misahana ny solika ireo fako avy amin’ny fanadiovana ireny solika ireny. Eo ihany koa ny fametrahan’ny orinasa mpanao lalana RN2 ny barikana godorao. Ireo rehetra ireo nitambatra no nampijoalajoala sy nampanano sarotra ny famonoana ny afo teo amin’ity faritra nitranga’ny firehetana ity. Mifanakaiky amin’ity orinasa mpanondrana letisia ity koa anefa ny citerne lehibe mitahiry amoniaka.
Nifanome tanana ireo vondron’ny mpamono afo…
Nifarimbona nifanome tanana tamin’ny famonoana afo ny orinasa Galana, ny kaominina, Spat, ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy niaraka tamin’ny tetikasa Ambatovy satria loza mitatao ho an’ny tanànan’i Toamasina raha tsy voafehy haingana ity afobe ity. Samy nandray ny andraikiny, araka izay tandrify azy, ireto orinasa manana fiarabe mpamono afo ireto. Ho an’ny mpamono afo ao amin’ny seranam-piaramanidin’Ambalamanasy nampiasa “mousse” na ireo rano miendrika ranon-tsavony fampiasa amin’ny famonoana afobe toy izao. Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina teo ny firehetana ary tsy voafehy izany raha tsy tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro. Zava-doza, araka izany, no saika nitranga raha tsy voafehy ny afo noho ny tandrevaka kely monja.
Doro trano niniana natao: Jeneraly misotro ronono sy ny vadiny maty tao anaty haintrano 25/09/2020
France-Suisse: Madagascar demande l’extradition de Raoul Rabekoto 25/09/2020
Toby Makis Andohatapenaka: fitantanana amin’ny informatika ny mpandeha 25/09/2020
11 è Fed: 518 tapitrisa euros avy amin’ny UE 25/09/2020
Fihariana-Symabio: tosika ho an’ny fambolena biolojika 25/09/2020